ARCHIVE, BANKING, MUDRA MAMILA » फलोअप : ग्राहकको नागरिकता दुरुपयोग गरेको भन्दै सेन्चुरी बैंक विरुद्ध उजुरी, बैंकको यस्तो दावी !
काठमाडौँ - केहि समय अघि भएको बैंकिङ एक्स्पोमा खाता खोलेका ग्राहकको नागरिकता बैंकका कर्मचारीले निजी मोबाइलमा खिची त्यसको दुरुपयोग गरेको र सेन्चुरी बैंकमा ग्राहकका डकुमेन्टहरु यसरी दुरुपयोग हुने गरेको खबर खबर अर्थ सरोकार डटकमले सार्वजनिक गरेपछि बैंक विरुद्ध उजुरी परेको छ । बैंक विरुद्ध प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा उजुरी परेको हो । कार्यालयमा आफ्नो नागरिकताको दुरुपयोग भएकाले यसबारे सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषी उपर कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाइयोस् भन्दै उजुरी परेको हो । कार्यालयले सो उजुरी अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवश्यक अनुसन्धानका लागि पठाउने बुझिएको छ ।
भएको के हो ? पढ्नुहोस् तलको समाचार :
यता अर्थ सरोकार डटकमसँग कुराकानी गर्दै बैंकका कर्मचारी सुवाश शर्माले बैंकका कर्मचारीले त्यस्तो गलत काम कुनैपनि हालतमा गर्न नसक्ने दावी गरेका छन् । 'हामी हाम्रा कर्मचारीप्रति यति 'कन्फिडेन्ट' छौं कि उनीहरुले त्यस्तो कुनैपनि हालतमा गर्दैनन् । खाता खोल्न ढिलो भएको सत्य हो । खाता छिटो खोल्न हामीले मोबाइलमा नागरिकताको फोटो खिचेको पनि सत्य हो । एक महिनासम्म खाता खुल्न नसकेको पनि सत्य हो । यसका लागि बैंकको तर्फबाट म माफी चाहान्छु । तर नागरिकता दुरुपयोग भयो भन्ने कुरामा हामी सहमत छैनौँ । नागरिकता दुरुपयोगको कुरा सुनेपछि हामीले पनि आन्तरिक अनुसन्धान गर्यौं । त्यस्तो भएको छैन ।' शर्माले भने। अर्थ सरोकार डटकमसँग कुराकानी गर्दै उनले उक्त नागरिकता खाता खोल्न बाहेक कुनैपनि प्रयोजनका लागि प्रयोग नभएको दावी गरे । 'नागरिकता रहेछ, पहिला छैन भनेर ढाँटियो, त्यत्रो समय किन खाता खोलिएन त?' भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, 'त्यसमा बैंकको कमजोरी भएकै हो । हामीले उक्त कमजोरी स्वीकार गरेका छौं। तर कर्मचारीले अरुलाई ग्राहकको नागरिकता देखाए भन्ने कुरा गलत हो ।' उनले भने ।